Electronic Namathisela - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
namathisela Electronic indaba eziyisisekelo yokukhiqiza obukhulu izingxenye ifilimu. Kuyinto uhlobo nokunamathisela okuyinto ixubene ngokulinganayo by powder okuqinile kanye kuphela organic ngemva iphuma nge ezintathu roller esigayweni.
Njengoba uhlobo olusha impahla, unamathisele electronic luphakeme yendabuko imishini wesifunda (ukumelana wire, kagesi Ukushisa tube, njll) kanye sinezici nokuvikelwa kwemvelo, ukusebenza kahle eliphezulu futhi kwagezi, kanye nezindleko zayo iseduze ukuthi we impahla bendabuko , okuyinto nakanjani kube main isicelo isiqondiso esikhathini esizayo.
Longxin njalo baqhubeka kanjani bukhula ubuchwepheshe kanye ekuthuthukiseni imishini. imikhiqizo emisha eziningana Site electronic nokunamathisela Ukukhiqiza futhi sesivele kwafakazela Umbuso we kubo. Sigcina ubambisana CETC, BTR, BYD nokunye.
Ncoma imishini okokunamathiselwa electronic: ES / DS uchungechunge abahle eqondile ezintathu roller esigayweni, DYS uchungechunge wokubacindezela ababili roller esigayweni, YS / YSS uchungechunge wokubacindezela ezinhlanu roller esigayweni, YSP uchungechunge wokubacindezela ezintathu roller isigayo,
umugqa yomkhiqizo: okuzenzakalelayo nokunamathisela electronic umkhiqizo umugqa